अष्ट्रेलियालीमा मानसिक समस्याको विकराल अवस्था ! – Nepali Digital Newspaper
अष्ट्रेलियालीमा मानसिक समस्याको विकराल अवस्था !
वार्षिक दश लाखको संख्यामा गम्भीर प्रकृतिको मानसिक समस्या भएका अष्ट्रेलियाली उपचार गराउँदैनन्
यी मानसिक स्वास्थ्यका बिरामीहरु उपचार नगराइ बस्ने गरेको रहस्य पनि सो अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै सिन्ह्वाले खुलासा गरेको छ ।
प्रोडक्टिभीटी कमिसन नामक एक संस्थाको अनुसन्धानबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिए पनि बर्सेनी यति ठूलो संख्याका अष्ट्रेलियालीले उपाचार नै नगराएको पाइएको हो ।
उनीहरुमा कतिपयमा गम्भीर प्रकृतिको मानसिक रोग छ भने केहीमा डिप्रेसन, मानसिक त्रास, चिन्ता लगायतका समस्या रहेको पाइएको छ । यी बिरामीहरुमध्ये करिब ३० लाख नागरिक स्वास्थ्य उपचारका लागि पहूँचमा रहने गरेका छन् । उनीहरुलाई उपचारको पहूँच हुने गरेको बताइएको छ ।
अष्ट्रेलियामा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार खर्चमा पनि भारी मात्रामा बृद्धि भइरहेको छ । न्यून स्वास्थ्य बजेटका कारण पनि उपचारको पहूँचसम्म मानिस पुग्न नसकेको उक्त अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।